Mayelana NATHI - Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd.
Ukuntula ukholo emabhizinisini kufana nokuntula ukholo kubantu. Kunzima ukukwenza kuzuza imbangela enkulu futhi kuzuzwe impumelelo eqhubekayo. Noma ngabe yiMboni yebhizinisi isu noma ukuhlela kabusha inhlangano, cishe zonke izinguquko zithembele kokuvamile, inkolelo ecacile nohlelo lwamasiko. Eqinisweni, ukusungulwa noma ukuguqulwa kwezinkolelo zebhizinisi iqalwa ngosomabhizinisi ngokuya ngezidingo zenguquko yamasu futhi iyasebenza
Lapha, ungabona ukusebenza kwethu kokukhula futhi ufunde ngentuthuko yethu yakamuva. Sizimisele kakhulu ukuhlanganyela nawe Jabulela umuzwa omuhle wokukhula ndawonye nabalingani bethu emhlabeni wonke. Vele, uyabona umthwalo wethu wemfanelo nesibopho. Ekuphishekeleni ibhizinisi kanye nabasebenzi ukuze bakhule ndawonye ngasikhathi sinye, sihlala sinamathela endleleni yentuthuko esimeme futhi sithatha ngenkuthalo ezenhlalo umthwalo, Inhlalakahle yomphakathi eshisekayo, ukubuya kwezenhlalo.
Lapha, ungabona futhi umbono wethu. Siphishekela ngokungaphezi "ezezimali ezimbili, ezintathu ezintsha, ezinhlanu, isigidini "Izinhloso zamasu, hhayi nje kuphela ukuzama ukufeza uguquko oluqhubekayo kanye nokwenza ngcono umnotho waseChina ngaphansi kokujwayelekile okusha, kodwa futhi nokwabelana ngamathuba nozakwabo bomhlaba jikelele, Thuthukisa ndawonye.
Inani livela ekwakheni! Sikumema ukuthi nakhe ikusasa ndawonye!
Gxila ekwenziweni kwempompo ephephile nenobungani bemvelo futhi wakhe inani labo bonke ababambiqhaza.
Phakamisa isithombe se-Chinese pump & system industry, ekubeni yinkampani ehola phambili yentuthuko kule mboni.
Inani Le Core Leadrive
Qalisa ibhizinisi nge-VIRTUE, Phishekela impumelelo ngo-PERFECTION, Win win with EFFICIENCY, Go foward with Right ACTIONS.
Isithombe sebhubesi esinomdlandla, ukuphana, ithemba kanye nokuvelela sidalwa njenge-mascot ngokuya ngesethenjwa se-zodiac se-Leadrive.
IZhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. Kutholakala eTaizhou-imbeleko enamandla idolobha lomnotho wangasese esifundazweni saseZhejiang, nokuthembela kwezomnotho omkhulu isiyingi seYangtze River Delta, iZhejiang Leadrive Electric Motor Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi "i-tripow motor") inemvelo ephakeme yezwe. Esikhumulweni sezindiza i-Huangyan ngokuba ngamakhilomitha ama-2 kuphela futhi itheku laseHaimen liqhele ngamakhilomitha ayi-10, inkampani ithokozela umhlaba osebenza ngamanzi-umoya-ukuhanjiswa.Ngokuphathwa kwayo okusha ithimba, uhlelo lokuphatha lwesimanje, abasebenzi abasezingeni eliphakeme, abenzi bokuqedela izinsiza, imishini yokuhlola ephelele, amandla amakhulu ezobuchwepheshe, umkhiqizo onokwethenjelwa ikhwalithi, inqubo enhle yokwenza, uhlelo oluphelele lwekhwalithi, i-R & D ethuthukile umthamo kanye neqembu lokuthengisa elikhokhelwayo, iLeadrive MOTOR isiphenduke inkanyezi ekhulayo e China motor umkhakha. Inethiwekhi yokuthengisa isabalale yaya ezifundazweni ezingaba ngu-20 namadolobha ezweni lonke. Umbono wayo womkhiqizo uhlotshiswe kuwo wonke umuntu isibe ukukhetha okukhethiwe kwama-cusomers futhi yazuza idumela elihle phakathi kwabasebenzisi.
Imoto ye-Leadrive igxile ekwenziweni, ocwaningweni nasekuthengisweni kwezinhlobo ezahlukene wezimoto. Imikhiqizo yayo ifaka phakathi uchungechunge oluhlukahlukene lwe-3-ph motors asynchronous suchas Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP namanye ama-motors akhethekile atholakele. Ukwamukela ama-sandard afanayo kazwelonke futhi ngamanani wamandla nobukhulu obukhuphukayo kuma-standrds e-IEC, imikhiqizo yawo ine izinzuzo kufaka ukusebenza kahle okuphezulu, i-torque ephezulu yokuqala, izinga lomsindo ophansi ukudlidliza okuphansi, nokwethenjelwa okuphezulu. Imikhiqizo ihlolwe ukuthi ihambisane ne-CE CONFORMITY ye-EU amazwe futhi i-CCC ne-CQC iqinisekisiwe. Le nkampani izuze ukuhlangana okuyi-IS09001 ukuhambisana kwesistimu yekhwalithi. Imoto ye-Leadrive izibophezela kwizisombululo ezithuthukisiwe ze- Abasebenzisi ekusetshenzisweni kwezimboni kanye nogesi ngokwenza umaki okhethekile owenziwe ngokwezifiso izinjini.
Ukuqamba nobuqotho yisimiso sethu. Ukuzivumelanisa nezimo nokuzivumelanisa nezimo kuyinzuzo yethu. Sihlose ukumela i-Made in China emkhakheni wama-motors kagesi emhlabeni jikelele. Namathela emcabangweni wokuthi "uphathe amakhasimende ngobuqotho futhi uwine imakethe ngekhwalithi" nokuhlangabezana nezidingo eziguqukayo zamakhasimende ekhaya nase-aborad, thina abazinikele ekudalweni komkhiqizo we "Leadrive motor" futhi bakwenze kwazi neChina kanye emhlabeni. Ngokwethembeka kwethu nobuhlakani, sibheke phambili ekusaseni eliqhakazile sindawonye nawe.